Author: Vobar Voodoorisar
Waraanni Adaal Mabraq harka Oromootti baqe, inniniis lbaqatee laga Awaash cehe. Raaboonni yeroo itti ilmaan kormaa Raaba tahan jedhamu, waggaa jiddutti.
Jiruu dhufataa deemuudhaan yeroo itti ofdandayutti tarkaanfataniidha.
Ilmaan jaarsaafii ilmaan Kormaa d. Seenaa qabsaayaa fi goota Oromoo Dr Diimaa Nagoo. Garuu yeroo dheeraa keessa tahuun hinmamu.
Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon polotikaa Gadaa tokkorraa kanitti dabru, ayyaana kanarratti horiin loon qalamanii, nyaachisni guddaan godhama. Sirna Gadaa keessatti muuda Qaaluu kan yeroo malee, ayyaanni guddaan muuda jedhamu jira. Gibeen qabachuuniis yeroo kana jalqabe. Ilmaan kormaafi Ilmaan jaarsaa: Ijoolleen dhiiraa sadarkaa Gammomaarra jiran: Muudanni Gadaa isaa fixee Kiiloleetti dabarse.
Maqaan Goggeessota Gadaa bakka garagaraatti: Isaaniis warraa akka a. Kanarraa akka ilaalcha polotikaa baraatti hubachuuf waan Paartii ilaaluun gaarii taha. Doorama Bakka heddutti sadarkaa itti aangoo qabachuudhaaf ilmaan kormaa qophii barbaachisaa godhaniidha.
Kun hundi dinagdeefi polotikaa sirna hawaasaarratti hundeeyfamau; kanneenirraa calaqqisa argamaniidha. Gujii keessatti — Raaba jedhama. Abdaarrii-ayyaana dachii midhaan baasisuuti Qaallonniis sirna ayyaana amantii kanarratti ummata gorsu, jajjebeessu.
Boorana keessatti — Raaba dorii jedhamu.
Osoo gaarri, hoqiifi hallayyaan hinjiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture seenaa Habashaa Alaqaa Atsimeen. Oromoonni gootummaan lolanii gaafa 12ffaa waraana Habashaa dahannoo isaa keessatti itti seenaanii hedduu irraa fixan.
Sirni Gadaa sirnaafi seera Oromoonni ittiin walbulchu, kan duulee roorroo ofirraa ittisu, kan dinagdee isaa ittiin tikfatuufi dagaagfatu, akkaata inni itti waliin jiraatuufi kan hawwiin dhala Oromoo cufa ittiin guutu ture. Boorana keessatti ilmaan Dooriiwwaniifi warra Gadaati. Ambulance refused to address the elderly despite the sit-4 days.
Haaluma qoodama gosa keessa duraan tureetu Sirna Gadaa keessattiis ga-dhaabbate jechuudha. Sadarkaa Dooramaa Booranaa keessatti iddoo lamatti qoodama. Dhugaan isaa garuu sirna oromoo, ofkeessaa qabaachuudha.
Namoota biraa wajji jiraata, hojjataas. Ilmaan kormaa sadrakaa Dabballoomaa fixan Gaammotti dabru. Galaawudoos Islaamoota mohuu dandahullee Oromoobiyya isaaf lolu mohuu hindandeenye. Yeroon isaas osoo hin gahinnillee waan beekamuuf sadarkaa itti aanuuf isa qopheessaa ture. Sadarkaaleen Gadaa ilmaan kormaa keessa dabran bakka gariitti amala addaa yoo qabaatanillee waliigalatti akka armaa gadiitti keenya.
Isaaniis, Marsaan duraa Kotaaba abbaa yeroo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati. Inniniis kan mucaa argachuuti. Namuu waan waliin horate waliin dhimma bahuurraa dabree hawaasa keessatti walbadhaasuufi walgargaaruun aadaa Gadaa keessatti beekamaadha.
Tuulama keessatti- Luba jedhama. Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Jechuun adaba namarratti seeraan dabru malee, waan halaba out-casted nama taasisan jiru. Sadarkaan Gadooma isaanii waggaa 40 jiddutti waan tahaniif, isaan keessatti dalagaa akkanaa doorama kan qaban wagaa jidduutti kan jiran Tuulama keessatti Qondaala, Ituu keessatti Raaba, akkanatti ofqopheessu.
Gositi hangafni yeroo warra kaan qaceechu, geggeessu warri quxxusuun isaan jalati walitti qabamu. Lubni hundi duula akka duuluufi laf haaraya baasan malee, meendhicha akka hin hidhanne kan seenax ture. Gadooma sadarkaa itti ilmaan kormaa aangoo polotikaa qabataniidha.
Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Kanaaf, Gadaan waggaa saddeet saddeetiin lakkaawama.
Wallo keessati kan Gadaa fudhate Harmuffaa jedhama. Isaaniis, bara Gadooma abbootii isaanii keessa waggaa 40 abbootii isaanii eeganii kan dhalatan waan tahaniif sadarkaa Gadaa keessa seenuudhaan miseensa paartii tahuu dandayan. Ummata ollaa wajjiin waldhabbiin yoo argamees, gumaabaasuufiis tahee, falmu, lola waan ilaaluufi dantaa lammii saanaa guutummatti manguddootaan ilaalamee murtii godhata. Marii seeraafi heeraarratti argamanii akka seerriifi heerri Gadaa hin dabneef gorsuufi qajeechuudha.
Harmuf Awaash cehee Affaarootafi Habashootatti duuluu jalqabe.